Kuuriyada Waqooyi oo madaxweyne ku xigeenka Maraykanka ku tilmaantay "doqon" - BBC News Somali
Kuuriyada Waqooyi oo madaxweyne ku xigeenka Maraykanka ku tilmaantay "doqon"
24 Maajo 2018
Choe Son-hui ayaa sheegtay in Kuuriyada Waqooyi aysan "Maraykanka ka baryidoonin wadahadal" isla markaasna aysan caddaadis ku saaraynin in ay ka soo qaybgalaan wadahadalka.
Maalmihii u dambeeyay labada dhinacba waxay ka digeen in laga yaabo in dib loo dhigo amaba la baajiyo kulanka ay Trump iyo Kim ku ballansan yihiin 12ka Juunyo.
Pyongyang ayaa sheegtay in ay dib uga baaraan dagi doonto haddii uu Maraykanku ku adkaysto in iyaga oo kali ah ay ka tanaasulaan hubkooda nukliyeerka ah.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Talaadadii sheegay in ay Waqooyiga u taallo in ay shuruudda buuxiyaan si wadahadalku u dhaco.
Choe Son-hui ayaa marar badan ka qaybqaadatay xiriir dublamaasi oo Maraykanka lala sameeyay.
Moon oo Trump kala talinaya waxyaabaha uu Kim kala hadlayo
Maxay Kuuriya Waqooyi u burburinaysaa goobihii tijaabada Niyuukleerka?
Maqaal lagu qoray wakaaladda wararka ee KCNA ayay Choe ku sheegtay in Pence uu toddobaadyadan saxaafadda u sheegayay hadallo aan "laga fiirsanin oon wanaagsanayn" kuwaas oo ay ka mid ahayd hadalkii uu ku sheegay in laga yaabo in "Kuuriyada Waqooyi ay ku dambayso jidkii Liibiya".
Waa tuma haweeneyda ay geerideeda ka murugeysan yihiin jilayaasha Hindiya?
Saroj Khan waxay qoob ka ciyaarka bartay jilayaal badan oo ay ku jiraan Madhuri Dixit iyo Sridevi.
Abwaanka Soomaaliga ee u bareera soo saarista miinooyiinka
Xasan Koosaar, oo BBC-da la hadlayay wuxuu yiri: "Maalintii aan dhalnayay waxaa magaalada la igu dhalay duqeynayay 9 diyaaradood."
Lix dhacdo iyo 60 kii sanno ee xornimada Soomaaliya
Waxaa jiro dhacdooyiin waaweyn oo dalka ka dhacay, balse lixda ugu waaweyn ee dhacay tan iyo 1960-kii, ayaan halkan idiinkugu soo gudbineynaa.